Abaalmarin lagu bixinayo dil sheegis - BBC Somali - Warar
Abaalmarin lagu bixinayo dil sheegis
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 16 Febraayo, 2013, 11:19 GMT 14:19 SGA
Raiisal wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid.
Raisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, ayaa ka dib kulan uu la qaatay madaxada idaacadaha maxalliga ah ee ka howlgala Muqdisho isaga iyo wasiirka warfaafinta waxaa uu ku dhawaaqay in 50 kun oo doolar la siin doono qofkii soo sheego ama qabta gacan ku dhiigle dilay wariye Soomaaliyeed. Waxaa Raisul wasaarauhu uu intaa ku daray in isaga shaqsi ahaan u uu taagan yahay in uu xaqiijiyo in lacagtaasi loo gacan galiyay qofkii xogta keenay ama gacanta ku dhigay dhagarqabaha.
Waxaa socota dood laga yeelanayo sharci cusub oo loo sameynayo saxaafadda Soomaaliya kaas oo ay xukuumaddu dooneyso in ay horgeyso baarlamaanka Soomaaliya.
Soomaaliya ayaa waxaa ay ka mid tahay dalalka ugu horeeya ee lagu dhibaateeyo saxafiyiinta, waxaana hadda xabsi ku jira wariye waresytay haweeney sheegtay in la kufsaday iyo haweeneydii sheegtay in la kufsaday oo maxakamad ay ku xukuntay hal sano oo xarig ah.